MARKA 13.28-37	F. 5 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 13.28-37	F. 5
MIVONONA TSARA AMIN’NY FIAVIANY
Betsaka sy amin’ny antsipiriany ny nambaran’ny Tompo ho famantarana mialoha ny hiverenany indray. Ampianariny noho izany ny olony mba hitily, hanara-maso, hamantatra ny fotoana. Inona no zava-misy, inona no nolazain’i Jesoa? Tsy misy afa-tsy Andriamanitra Ray no mahalala ny ora hiavian’i Jesoa. Ny anjarantsika dia ny miomana sy mivonona mandrakariva, toy ny ho avy amin’ny segondra manaraka eo ny Tompo.
Ny ho levona, ny haharitra. Na inona na inona mety heverin’ny olona ho sarobidy sy tsara ka katsahiny sy ifoforany fatratra amin’ny zavatry ny tany, dia ho levona ihany. Raha manana sy mihazona ary mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra kosa izy, ka avelany hitoetra sy hanapaka amin’ny fanahiny, ny sainy, ny fony ary ny fiainany manontolo izany, dia manana harena izay tsy mba ho levona mandrakizay izy. Izany no mitondra ho amin’ny fiainana mandrakizay ao amin’ny Tompo.
Izahao toetra ny fiainanao, inona marina no tena mameno izany?
Fiandrasana matotra. Ny fanoharana izay omen’ny Tompo dia maneho amintsika fa mila miasa, manatanteraka antsakany sy andavany ny fanompoana sy ny andraikitra izay nametrahany antsika ety an-tany isika. Eo am-panatontosana izany no tiany hahitana antsika rehefa tonga indray izy.
Mitandrema. Tsy hanao kitoatoa na diso làlana amin’ny finoana. Miambena: Tsy varimbariana na matoritory amin’ny fiainam-panahy. Mivavaha: Manana firaisana tsara amin’Andriamanitra.
Ireo no mahazaka telo olan’ny fahamatorana amin’ny fiandrasana ny fiavian’i Jesoa handray ny olony mahatoky.
Famporisihana : Ataovy vaindohan- draharaha ny tsy hisian’ny fahatapahan’ny fifandraisana tsara amin’i Jesoa Kristy, Tsy fantatrao mihitsy: mety ho rehefa avy eo dia ho avy Izy.